विदेशी समय | मझेरी डट कम
kkskals — Fri, 12/17/2010 - 22:49
"ल त गएँ है, फेरी भेटौला नी पछि"
म साथी संग बाईबाई गर्दै काममा जान हतारहतार गरि रेल चढ्नको लागि हस्यांगफस्यांग गर्दै ट्रेन स्टेसन तिर लम्किन्छु ।
दौडदै हातको घडी हेर्छु, झन्डै १५ मिनेट जति ढिलो भैसकेको हुन्छु म । अनि काममा ढिलो पुगिन्छ भनेर मलाई एकदमै डर लागेर आउँछ र आतिएर दौडको रफ्तार बडाउदै लैजान्छु मैले ।
स्याँ स्याँ गर्दै केहि क्षणमा म स्टेसन पुग्छु तर ट्रेन आउन पनि अझै ३ -४ मिनेट बाँकि हुन्छ । म सोच्छु " कतै मलाई कामबाट निकाल्ने पो होकी ढिलो भयो भनेर? धेरै गाली पो गर्ने हो की ?" "हैन, यति सानो कुरामा त किन मलाई कामबाटै निकालि हाल्ला र ? एकचोटी लाई त माफ गरिदिन्छ होला नी" यस्तै यस्तै मनोबादहरु मेरा मनमा खेलिरहे । केहि क्षणको पर्खाई पछि ट्रेनमा चढेर काममा जान्छु हतारिदै, हतारमै लुगसुगा लगाएर करिब ५ मिनेट जति ढिलो म काममा छिर्न सफल हुन्छु ।
काममा छिर्ने बित्तिकै ग्राहकहरुको निकै लामो लाइन लागिसकेको देक्छु । मेरो सट्टामा मेनेजर आफै काम गरिरहेको हुन्छ ।
मेनेजर अलि थाकिएको अनि रिसाएको अनुहारमा काम गरिरहेको जस्तो मैले अनुमान गर्छु । जापानी भाषामा मैले "नमस्कार" गरें । उत्तरमा उनले टाउको मात्र हल्लाए । अनि मैले डराएर सानो स्वरमा "ढिलो भएकोमा माफ गर्नुहोला सर एकछिन बाटोमा काम पर्यो त्यसैले ।" "एकछिन पर्ख" उनले भने ।
केहि क्षण पछि ग्राहक हरु सबै फर्किए , अनि मलाई कुरा गर्न अफिस कोठामा लगेर गए । अनि सोधे ढिलो हुनुको कारण । "साथीसंग भेट्दा अलिकति ढिलो भयो सर "मैले बताएँ । "तिमीलाई साथी ठूलो की काम ठूलो ? अनि किन ढिलो हुन्छ भनेर फोन नगरेको यहाँ ?" अलि रिसाएझै गरि प्रश्न सोध्यो । "सरि सर एकचोटी को लागि माफ गर्नुहोला, अब आइन्दा यो घटना फेरी दोहोर्याउने छैन । मलाई त नेपालमा जस्तै ५ मिनेट जति ढिलो हुदा केहि हुदैन जस्तो लाग्यो, त्यसैले फोन नगरेको सर ।"
"अहँ यस्तो कुरा चल्दैन जापानमा । समय भनेको समय हो , जसले समयको पालना गर्दैन, त्यो यहाँको लागि काम छैन । अहिले तिमीले गर्दा यहाँ धेरै ग्राहकहरुलाई पर्खाउनु पर्यो । ग्राहक भनेको देबता हो हाम्रो ।" "हैन सर , मलाई यहाँको सिस्टमको बारेमा त्यति थाहा थिएन त्यसैले .................।" "सरि कृष्णजी आजै बाट कामबाट बाईबाई ........................"हातले बाईबाई गर्दै भन्यो ।
मेरा आँखाबाट आँसुका धारा बगे , छाँगाबाट खसे जस्तै भयो मलाई । रुँदैरुँदै हात जोडेर धेरै बिन्ति गर्छु मैले, तर अफसोच, ऊनको कठोर मन मेरो आँसुले पगाल्न सकिन । अन्तमा मलाई कामबाट निकालेरै छाडे । म केहि नबोलेर बाहिर निस्कन्छु, मेरा आँखामा आँसु छ्चाल्कीरहेको हुन्छ । अनि मैले आफ्नो नेपाली काम सम्झन्छु त्यसबेला, नेपालीको कमलो मन पनि सम्झन्छु । अनि धिक्कार्छु नेपालीको कामगर्ने शैली, अनि समयलाई वास्ता नगर्ने वानिलाई ।
र अन्तमा अबदेखि कहिल्यै पनि समयलाई हेलचेक्र्याई नगर्ने प्रण गर्दै नयाँ कामको खोजीमा लाग्दछु.........................
कृषि विकासमा भयो
के कर्मले हराउँछ
शिवहरि पण्डितको पुष्पोद्यान नियाल्दा
गण्डर्षिका कविताहरू पढ्दा पढ्दै
गोठेमल चक्र हेर्दा
चार मुक्तक (प्रकाशिलो हुन्छ संसार)